Hoggaamiyihii ugu caansanaa burcadbadeeda Soomaaliya oo lagu dilay gobolka Mudug - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaHoggaamiyihii ugu caansanaa burcadbadeeda Soomaaliya oo lagu dilay gobolka Mudug
March 20, 2019 Puntland Mirror Somalia 0
Garaad oo warbaahinta kula hadlaya Muqdisho kadib markii lasoo daayay. [Screenshot/SNTV]
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Axmed Maxamuud Maxamed oo si weyn loogu yaqaanay Garaad, kaasoo kamid ah raga ugu waa-weyn ee burcadbadeeda Soomaaliya ayaa lagu dilay gobolka Mudug Isniintii, sida ay sheegeen eheladiisa iyo ciidamada booliiska.
Garaad ayaa waxaa jidka u galay dilayna niman hubeysan deegaan la dhaho Colfuula uu kuyaala gobolka Mudug, sida saraakiil katirsan ciidamada booliiska ay u sheegeen bog wareedka Puntland Mirror.
Garaad ayaa ku sii jeeday magaalada Gaalkacyo waxaana uu ka yimid Hobyo markii dilku uu dhacay, sida ay booliisku sheegeen.
Ma cadda cida ka dambeysa weerarka, balse qaar katirsan eheladiisa ayaa Puntland Mirror u sheegay in ay jirtay muran xoogan oo u dhaxeeya isaga iyo maleeshiyo deegaanka ah.
Waxa la aaminsanyahay in uu jiray 50 sanno, Garaad ayaa ku lug lahaa afduub badan oo ka dhacay Gacanka Cadan intii lagu guda jiray xilligii burcadbadeeda Soomaaliya.
Sanadkii 2011, Garaad ayaa waxaa qabtay ciidamada badda dalka Iran waxaana uu xabsi ku soo qaatay ku dhawaad sideed sanno balse waxaa la sii daayay bishii Febaraayo ee sanadkan isaga oo ku soo laabtay dalkiisa hooyo.
Hal askari oo ku dhintay weerar lagu qaaday saldhig booliis oo kuyaala gudaha Kismaayo
Kismaayo-(Puntland Mirror) Ugu yaraan hal askari oo katirsan ciidamada booliiska maamulka Jubbaland ayaa ku dhintay kadib markii bumbo gacmeed lagu weeraray saldhiga ciidanka booliiska ee magaalada Kismaayo, sida ay sheegeen ilo-wareedyo dhan ammaanka ah. Masuuliyiin [...]
Puntland Parliament elects Abdirashid Yousuf Jibril as new speaker
Garowe-(Puntland Mirror) Puntland Parliament on Thursday elected Abdirashid Yousuf Jibril as a new speaker. Three candidates, Abdirashid Yousuf Jibril, Abdijamal Osman Mohamed and Ali Ahmed Dhahar took part in the election. Abdirashid received 46 votes [...]
Xasan Shiikh Maxamuud oo tagay magaalada Kismaayo
Kismaayo-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud ayaa maanta oo Isniin ah gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland. Madaxweynaha iyo wefdiga la socday ayaa waxaa si diiran ugu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha [...]